Inona no tokony ho fantatrao momba ny rohy nomena?
Raha misy olona manontany ahy hoe inona no lafiny lehibe indrindra amin'ny fanatsarana ny fikarohana, dia hamaly aho fa tsy azo antoka intsony ny backlinks. Na inona na inona mahazo anareo. Ny zavatra tokony ho izy sy ny zavatra hafa, ny tsara kokoa. Aza mino izay rehetra milaza fa maty ny tranokalan'ny rohy. Ity fanambaràna ratsy ity dia miparitaka amin'ny webmasters tsy voavolavola sy tsy misy za-draharaha izay vao haingana no nadalohan'ireo fitaovam-pikarohana.
Raha ny tanjon'ny raharaham-barotra an-tserasera amin'ny aterineto dia ny hanintonana ny fifamoivoizana ara-organika ho an'ny tranokala, dia mila mifantoka amin'ny fanorenana backlinks. Hodinihina ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba hividianana rindran-kira nafenina miaraka amin'ny tanjona hakana ny fitarihana mankany amin'ny tranokalanao.
Ny andraikitry ny backlinks amin'ny fampiroboroboana ny orinasa
Ny fitaovam-pitadiavana toa an'i Google dia mamaritra ny toerana misy anao sy ny lazanao amin'ny isa sy ny kalitaon'ny backlinks izay tonga ao aminao tranonkala avy amin'ny loharanom-baovao hafa. Ny rohy fidirana mankany amin'ny tranokalanao dia antsoina koa ao amin'ny rohy anatiny na anatiny. Raha manana loharanom-baovao maro avy amin'ny tranonkala PR9 na tranokala 10 avo lenta ny loharanon-tranonkala iray, dia mety ho laharam-pahamehana amin'ny TOP na pejy.
Raha mbola manontany tena momba ny andraikitry ny backlinks amin'ny fampiroboroboana ny aterineto ianao, avelao aho hizara aminareo tombontsoa tena ilaina amin'ny fananganana rindran-kaonty:
Raha ampifandraisina amin'ny loharanom-baovao avo lenta avoakan'ny Internet na Internet ny tranonkala, dia hahasarika azy ho masitera kokoa izany ary hanome azy ny laharana ambony amin'ny pejin'ny valin'ny fikarohana.
Raha manana sitemap ao amin'ny tranokalanao ianao, dia hanindry bokotra vaovao vaovao havoakanao Google. Na dia izany aza, ireo mpitsikilo dia hikaroka matetika kokoa ny tranokalanao raha mahita finday miavosa izay manondro azy io. Ny bakipika kokoa azonao, ny tsaratsara kokoa ny tranokala fitsangatsanganana anao dia izay mety ho an'ny fanatsarana ny tranokalan'ny fikarohana.
Afaka mamerina fifamoivoizana goavana any amin'ny pejin'ny tranonkala ny backlinks. Ity fitohanana ity dia mety hisy fiantraikany amin'ny tranokalanao PageRank ary hampiakatra ny fahefanao. Ambonin'izany, ny fifamoivoizana matetika dia nivadika ho fivarotana.
Mila mividy backlinks niche?
Ny fividianana backlink no fomba haingana indrindra hahazoana azy ireo. Na izany aza, mila mila fomba fijery mahomby amin'ity dingana ity ianao. Tokony ho fantatrao fa amin'ny alalan'ny fividianana rohy ianao dia manitsakitsaka ny toro-làlan'ny webmaster Google. Noho izany, raha tsy manana fomba amam-panao mahaliana momba ny fividianana rindran-damina ianao, dia mety hahazo sazy toy ny backlinks deindexation, ho very ny toeran'ny filaharana, sy ny sisa.
Araka ny fampiharana, ny risika dia avo be rehefa mividy rohy amin'ny vidiny ambany, toy ny $ 5 isaky ny rohy. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny vidim-piainana toy izany dia miresaka momba ny kalitaon'ny loharanon'ny tranonkala iray izay manome anao izany. Maro amin'ireo tranonkala spammy no noforonina miaraka amin'ny tanjona tokana hividy sy hivarotra rohy tafiditra. Google dia afaka mamantatra ny tranonkala tahaka izany ary manasazy azy ireo, ary ho azonao ny hanilihana azy ireo Source .